Aqoonsigeenna cusub ee Masiixa, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Martin Luther wuxuu ugu yeedhay Masiixiyiinta "dambiilayaal isku mar ah iyo quduusiin". Wuxuu asal ahaan magacan ku qoray Latin simul iustus et peccator. Simul waxaa loola jeedaa "waqti isku mid ah" af Jarmal, iustus wuxuu u taagan yahay "cadaalad", et waxaa loola jeedaa "iyo" peccator wuxuu u taagan yahay "dambiile". Haddii aad ereygaas u qaadatid macno ahaan, waxay ka dhigan tahay inaan ku noolahay labadaba dembiile iyo dembi la'aan waqti isku mid ah. Ujeedada Luther wuxuu markaa noqon lahaa is burinaya marka loo eego ereyada. Laakiin wuxuu ka hadlay sifo ahaan wuxuuna doonayay inuu wax ka qabto isbadalka aan ku aragno boqortooyada Ilaah ee dhulka ka jirta weligiis si buuxda xor ugama ahan saameynta dembiga. In kasta oo aan Ilaah la heshiinnay (Quduusiin), kuma noolaanno nolol Masiixa kaamil ah (Dambiile). Markuu Luther soo saaray ereyga, marmar ayuu adeegsaday luqadda Rasuul Bawlos si uu u caddeeyo in nuxurka injiilku uu labanlaabmayo. Marka hore, dembiyadayada waxaa lagu tiriyaa xagga Ciise iyo xaqnimadayada anaga ah. Luqaddaan farsamo ee sharciga ah ee deyn bixinta ayaa suuragal ka dhigaysa in la muujiyo waxa sharci ahaan ay tahay mid runtiina run ah, xitaa haddii aan lagu arki karin nolosha qofka ay khusayso. Luther wuxuu kaloo yiri marka laga reebo Masiixa qudhiisa, xaqnimadiisa weligeed ma noqonayso (anaga oo gacanta ku haynna). Hadiyaddu waa hadiyadeheena kaliya haddii aan ka aqbalno isaga xaggiisa. Waxaan ku helnaa hadiyaddan iyadoo lala mideysan yahay kan hadiyadda siiyay, maadaama ugu dambeyntii bixiyaha uu yahay hadiyadda laftiisa. Ciise waa xaqnimadeenna dabcan Luther wax badan ayuu ka oran lahaa nolosha Masiixiyiinta marka loo eego jumladdan keliya. Xitaa haddii aan ku raacno badanaaba jumlada, waxaa jira dhinacyo aanannaan ku raacsaneyn karin. J. de Waal Dryden wuxuu dhaleeceeyey maqaal ku jiray joornaalka joornaalka ee Paul iyo Waraaqadiisu waxay sharraxaysaa tan soo socota (Waxaan uga mahadcelinayaa saaxiibkeyga wanaagsan John Kossey inuu ii soo diray khadkaan.):
Hadalka [Luther] wuxuu ka caawinayaa soo koobeya mabda'a ah in dambiilaha xaqdaro ah loogu dhawaaqo si xaq ah "xaqnimada" xaqnimada Masiixa ee ma ahan shaqsiga, ee, cadaalada dhaxalka ah. Marka eraygan uusan u muuqan inuu wax caawinaayo waa marka ay tahay - ha noqoto mid miyir-la’aan ama miyir-la’aanta ah oo ah aasaaska daahirinta (nolosha Christian) waa la arkaa. Dhibaatada halkan waa aqoonsiga socda ee Masiixiyiinta inuu yahay "dambiile". Magaca eraygu wuxuu muujinayaa wax ka badan rabitaan akhlaaqeed ama u janjeera ficillo mamnuuc ah, laakiin wuxuu qeexayaa caqiidada masiixiga ee ahaanshaha. Masiixiyiintu maahan oo keliya dambiile falalkiisa, laakiin sidoo kale dabeecadiisa .. Hadal ahaan nafsiyan ahaan ahaan, hadalka Luther wuxuu u muuqdaa inuu yahay dambiile akhlaaqeed, laakiin wuxuu ilaaliyaa ceeb. Sawirka is-sharaxaadda ee dembiilaha xaqdaran, kaas oo sidoo kale ku dhawaaqaya cafiska si furan, ayaa si buuxda u wiiqaya saamaxa cafiskaas haddii ay metelayso fahamka shaqsigu inuu yahay qof dembi leh illaa qoto dheer sababta oo ah waxay si guud u reebeysaa isbeddelka Masiixa. Masiixiyiintu markaa waxay lahaan doonaan isfaham is-faham, oo ay ku xoojinayaan dhaqamada caamka ah sidaasna waxay ku metelaysaa fahamkan inuu yahay wanaag Masiixi ah. Sidan, xishoodka iyo is-quudhsiga waa la qalloociyaa. («Dib-u-fiirinta Rooma 7: Sharciga, Nafta, Ruuxa,» JSPL (2015), 148-149)
Aqbal aqoonsigeenna cusub ee Masiixa
Sida Dryden leeyahay, Ilaah “wuxuu ku barayaa dambiilaha heerka ugu sarreeya”. Midnimada iyo iskaashiga lala yeesho Ilaah, Masiixa iyo Ruuxa, waxaynu nahay “abuur cusub” (2 Korintos 5,17) oo waa la beddelay si aan awood ugu yeelan karno "saami" xagga «dabeecada rabbaaniga ah» (2 Butros 1,4). Ma nihin dad dambiilayaal ah oo aad u jecel inay xor ka ahaadaan dabeecaddooda dembiga. Taas beddelkeeda, waxaan nahay carruurta Ilaah korsaday, gacaliyayaalow, la heshiisiiyay carruurta oo loo beddelay u ekaanta Masiixa. Fikirkayaga ku saabsan ciise iyo nafteena isbadal ahaan marka aan aqbalno xaqiiqda aqoonsigeenna cusub ee Masiixa. Waxaan fahansanahay inaynan annaga u ahayn sababta aan nahay, laakiin ay tahay Masiixa awgiis. Annaga nooguma ahayn iimaankeenna (taas oo had iyo jeer aan la dhammaystirin), laakiin xagga iimaanka Ciise. Fiiro u yeelo sida Bawlos u soo koobayo tan warqaddiisa warqad uu u diray kaniisadda Galatiya:
Waan noolahay, laakiin imika ma ihi, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira. Maxaa yeelay, waxaan haatan jidhka ku noolahay, waxaan ku noolahay aamin xagga Wiilka Ilaah, kan i jeclaaday oo naftiisa isu bixiyey (Galatiya 2,20).
Bawlos wuxuu fahmay Ciise inuu yahay mawduuca iyo ujeeddada badbaadinta iimaanka. Mawduuc ahaan, isagu waa dhexdhexaadiyaha firfircoon, qoraaga nimcada. Shay ahaan, wuxuu ugu jawaabayaa sidii innaga mid ah oo leh iimaan dhammaystiran, oo tan ku sameeya annaga iyo annagaba. Waa iimaankiisa iyo daacadnimadiisa, ee ma ahan kuwayaga, ayaa ina siiya aqoonsigeenna cusub taasna waxay naga dhigaysaa isaga kaliya isaga. Sida aan ku sheegay warbixinteedii toddobaadlaha ah toddobaadyo yar ka hor: adoo badbaadiya, Ilaah ma nadiifiyo maankeenna ka dibna wuxuu inaga tagayaa dadaalkeenna ah inaan raacno Masiixa. Taa baddalkeeda, nimcadiisa ayuu awood inoo siinayaa inaan si farxad leh uga qeyb qaadano wuxuu qabtay iyo annaga. Fadliga, waad aragtaa, waa wax ka iftiimaya uun Aabaha jannada ku jira. Waxay ka timid Aabbahayaga doortay, kan ina siiya hadiyado iyo ballanqaadyo badbaadada wadaada ah ee Masiixa, oo ay kujirto xaq ka dhigista, quduusnaanta, iyo ammaanta (1 Korintos 1,30). Waxaan ku aragnaa mid kasta oo ka mid ah dhinacyadaan badbaadadeenna nimco, innagoo lala shaqeyna Ciise, xagga Ruuxa ina siiya sida carruurta Ilaah loo jecel yahay, oo innaguna aannu nahay.
Ka fikirka nimcada Ilaah ee sidan ayaa ugu dambayn beddeleysa aragtideena wax walba. Tusaale ahaan: Nidaamkayga caadiga ah ee maalinlaha ah, waxaa laga yaabaa inaan ka fikiro meesha aan hadda u dhaqaaqay Ciise. Markaan dib uga fiirsado noloshayda aragtideyda ku jirta Masiixa, fekerkeygu wuxuu isu badalayaa fahmitaanka in meeshan aan aheyn meesha aan rabo inaan ku jiido Ciise, laakiin la iiga yeedhay inaan ku biiro oo aan sameeyo waxa uu sameeyo . Isbeddelkan fekerkeenna ayaa runtii ah nimcada sii kordhaysa iyo aqoonta Ciise ku saabsan yahay. Markaynu sii wada sii dhawaano isaga, waxaan wadaagno waxbadan oo uu sameeyo. Tani waa fikradda ah joogitaanka Masiixa ee Sayidkeennu kaga hadlayo Yooxanaa 15. Bawlos wuxuu ugu yeedhay "qarsoon" Masiixa (Kolosay 3,3). Waxaan u maleynayaa inaysan jirin meel ka wanaagsan oo lagu qarin karo maxaa yeelay Masiixu wax aan naxariis ahayn ma jiro mooyee. Bawlos wuxuu fahmay in himilada nolosha ay tahay inay Masiixa ku jirto. Ku sii jirista Ciise waxay keenaysaa sharaf leh isku kalsoonida iyo aayaha uu Abuuray Abuuray bilowgii. Aqoonsigaani wuxuu naga xoreeyaa inaan ku noolaano xorriyadda cafiska Eebbe oo aan mar dambe ku sii nagaan ceebta iyo dambiga. Waxa kale oo ay inaga xoraynaysaa inaan la noolaano aqoonta la hubo ee ah inuu Eebbe inaga beddelo xagga Ruuxa. Taasi waa xaqiiqada cidda runtii aan Masiixa ku nahay nimcada.
Si khaldan u tarjumida iyo tarjumida dabeecada nimcada Eebbe
Nasiib darrose, dad badani waxay si khaldan u turjubaan dabeecada nimcada Eebbe waxayna u arkaan inay tahay tigidh bilaash ah oo lagu dembaabo (Kani waa qaladkii antinomiyanimada). Farqi ahaan, khaladaadani waxay inta badan dhacaan markay dadku rabaan inay xiraan nimco iyo cilaaqaadka ku saleysan nimcooyinka Eebbe qaab dhismeed sharci ah (Kani waa khaladka sharciga). Qaab dhismeedka sharciyeed dhexdeeda, nimcada ayaa inta badan loo fahmaa inay tahay mid Eebbe ka reebban sharciga. Nimco markaa waxay noqotaa cudurdaar sharci ah oo addeecitaan aan is waafaqsanayn. Marka nimcada loo fahmo sidan, fikradda kitaabiga ah ee Ilaah sida aabbe jecel oo canaanan caruurtiisa uu jecel yahay waa la iska indhatirayaa, isku dayga inaad ku qasbiso nimcada qaab dhismeedka sharciga ah waa khalad aad u xun, oo nafta qaadata. Shaqada sharciga ahi kuma jirto cadaalad, oo nimcadu kuma eka sharciga. , istaag.
Lagu beddelay nimco
Faham darradaan nasiib darrada ah ee naxariis darrada (gunaanadkiisii ​​khaldanaa ee ku saabsanaa nolosha Masiixiga) ayaa laga yaabaa inuu raalli geliyo damiirka dambiilaha, laakiin waxay si ula kac ah u waayi doontaa nimcadii isbeddelka - jacaylka Ilaah ee ku jira qalbiyadeenna taas oo innagaga beddelan kara Ruuxa xagga gudaha ah. Runtaas runta ayaa ugu dambeyntii horseedda dambiga laga baqdo. Aniga oo ka hadlaya qibradeyda, waxaan dhihi karaa in nolosha ku saleysan cabsida iyo ceebta ay tahay bedelka xun ee nolosha ku saleysan nimcada. Maxaa yeelay taasi waa nolol isbeddelaysa jacaylka Ilaah, kaas oo xaq inaga dhigaaya oo inaga dhigaya midkeenna Masiixa leh xagga xoogga Ruuxa. U fiirso ereyada Bawlos ee Tiitos ku hadlaya:
Sababta oo ah nimcada bogsiinta ee Ilaah ayaa u soo muuqatay dadka oo dhan waxayna ina qaadataa edbinta inaan diidno kuwa aan cibaadada lahayn iyo rabitaanka adduunyada oo aan ku noolaano si miyir leh, caddaalad ah oo cibaado leh adduunkan. (Tiit. 2,11-12)
Ilaah ma badbaadin oo keliya inuu inaga tago isagoo naxdin leh, qaan gaar ah, iyo jidadka dembiga iyo baabi'inta leh ee nolosha. Wuxuu inaga badbaadiyey nimco si aan ugu noolaanno xaqnimadiisa. Nimco waxay ka dhigan tahay in Ilaah uusan weligiis naga quusan. Wuxuu wali sii siinayaa hadiyadda ah wadajirka midnimada Wiilka iyo iskaashiga lala yeesho Aabbaha, sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu nagu dhex qaado Ruuxa Quduuska ah dhexdeeda. Waxay ina beddelaysaa inaan noqonno sidii Masiixa oo kale. Nimcadu waa sida dhabta ah ee xiriirkayaga aan Ilaah la leenahay ku saabsan yahay.
Masiixa ayaan ku jirnaa marwalbana waxaan noqon doonnaa caruur jecel aabaheena jannada ku jira. Dhammaan waxa uu inaga codsado inaan sameyno waxay ku kortay nimco iyo aqoon ku saabsan isaga. Waxaan ku koray nimco anagoo baranayna aaminaada isaga iyo dhex maraba, oo waxaan ku kobcinaa aqoonta isaga adoo raaciya oo waqti la qaata. Eebbe kaliya nagama cafiyo nimco markii aan nolosheena ku nool nahay addeecid iyo cabsi, laakiin wuxuu sidoo kale nagu beddelaa nimco. Xiriirkeenna aan la leenahay Ilaah, Masiixa iyo Ruuxa, kuma koreyso meel aan u muuqdo inaan u baahan nahay Ilaah iyo nimcadiisa yar. Taa bedelkeeda, nolosheenu waxay ku tiirsan tahay isaga dhinac kasta. Isagu wuxuu ina yeelaa mid cusub isagoo inaga nadiifinaya gudaha. Haddii aan baranno ku sii jirto nimcadiisa, waxaan ku baran doonnaa sifiican isaga, aan u jeclaano isaga iyo jidadkiisa gabi ahaanba. Markii aan sii ogaano oo aan jeclaano isaga, ayaa inta badan aan la kulmi doonnaa xorriyadda aan ku nasanno nimcadiisa, oo aan xor ka ahayn dambiile, cabsi iyo ceeb.
Paul ayaa u soo koobaya sidan:
Waayo, nimcadiinna waxaa laydinka badbaadiyey rumaysad, mana aha xagga xaggiinna, waa hadiyadda Ilaah, ee ma aha xagga shuqullada, si aan ninna ugu faanin. Sababtoo ah waxaan nahay shaqadiisii, oo lagu uumay Ciise Masiix shuqullada wanaagsan ee Ilaah hore ugu sii diyaariyey inaynu ku dhex soconno (Efesos 2,8: 10).
Yaanan ilaawin inay tahay iimaanka Ciise - aaminnimadiisa - ayaa ina furaysa oo na beddeleysa. Sida qoraa warqaddii Cibraaniyadu na xusuusinayo, Ciise waa bilowga iyo dhammaystirka iimaankeenna (Cibraaniyada 12,2).
Aqoonsiga cusub ee Masiixa (Qaybta 1aad)